Qaramada midoobay oo cabsi ka muujisay dambiyo dagaal iney ka dhacaan Itoobiya
Monday January, 18 2021 - 10:51:47
Wednesday November 25, 2020 - 10:36:57 in by salman abdi
Qaramada midoobaya ayaa walaac ka muujisay dambiyada dagaal ee ka dhici kara deegaanka Tigraay maadaamaa ay ciidamada Itoobiya howlgalkoodi ugu dambeeyey oo ay ku qabsanayaan magalada Maqale ay fulinayaan, marka uu dhammaado muddadi ay dowladda dhexe u qabatay xoogagga TPLF iney isku soo dhiibaan.
Dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya iyo xogagga deegaanka Tigraay ayaa socda ku dhawaad seddex toddobaad.
Waxaana lagu soo warramayaa dagaalkaasi boqollaal qof iney ku dhinteen kumannaanna ay ku barakaceen.
Hay'adaha gargaarku waxay sheegeen colaadda iney sii hurineyso masiibooyinka bani-aadaminimo isla-markaana bariga Afrika ay xasilooni darro ka abuureyso.
Qaramada midoobay waxay sheegtay iney walaac ku abuurtay hanjabaadaha dagaalka la xidhiidha oo maalmihi u dambeeyey ka soo yeedhayey ciidamada Itoobiya oo ay ku sheegeen iney u ruqaansanayaan qabsashada caasimadda Tigraay ee Maqale oo ay ku nool yiihiin dad ka badan 500,000.
Axaddi ra'isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed xoogagga TPLF wuxuu u qabtay 72 sacadood iney isku soo dhiibaan, isaaga oo sheegay iney si nabad ah dowladda isugu soo dhiibaan 'maadaamaa aan la joogin meel laga noqon karo'.
Hogamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael wuxuu si cad uu ugu gacan seydhay baaqi Ra'isal wasaare Abiy Axmed ee ahaa iney ilaa iyo Arbacada ugu dambeyn xoogagga TPLF dowladda iisu soo dhiibaan.
Debretsion waxaa kale uu sheegay shacabkiisu iney diyaar u yihiin iney u dhintaan difaacidda xuquuqda ay u leeyihiin iney deegaankooda iyagu maamulaan.
Komsihiinka Xuquuqda Aadanaha dalka Itoobiya ayaa ururka dhalinyarada deegaanka Tigraay ku eedeeyey iney horraanti bishan xasuuq ka geysteen magaalada Mai-Khadra oo ay dileen dad ka badan 600 oo qof oo rayad ah.
Wuxuuna Koomishiinku sheegay dhainyaradu iney magaalada Mai-khadra dil ugu geysteen dadka aan ka soo jeedin qowmiyadda Tigreega guriyahoodana ay gubayeen.
Hay'adda Amnesty International oo u doodda xuquuqda aadanaha waxay horay u sheegtay in magaalada Mai-khadra uu xasuuq ka dhacay balse ma aysan sheegin cidda xasuuqaasi geysatay iyo inta qof ee la dilay.
Jabhadda Xureynta Shacabka Tigraay ee TPLF ee maamula deegaanka Tigraay wuxuu diiday dilkaasi inuu wax lug ah uu ku leeyahay, wuxuuna dalbaday guddi madax bannaan oo heer caalami oo baaritaan ku sameeyo dilalka dhacay in loo soo diro.
Dagaalka ka socda deegaanka Tigraay wuxuu ka dhashay khilaaf xooggan oo muddo ka dhex taagnaa Xisbiga TPLF oo ka mid ah xibiyada siyaasadeed oo ugu awoodda badnaa Itoobiya iyo Dowladda dhexe uu hoggaamiyo Dr Abiy Axmed.
Iyada oo khilaafka ugu weyna uu soo ifbaxay marki uu Abiy Axmed bishii June uu dib u dhigay doorashada guud isaga oo u sababeeyey faayraska corona dartii iny doorasha xilligeeda ku dhici karin.
Colaaddaasi ayaa la rumeysan yahay boqollaal qof iney ku dhinteen kumannaanna ay ku barakaceen
TPLF dowladda dhexe uu hoggaamiyo Abiy Axmed waxay u aragtaa sharci darro, iyaga oo ku doodaya Abiy inuu sharci uu dalka ku hoggaamin karo haysanin.
4-tii bisha November ra'isal wasaaraha Itoobiya wuxuu iclaamiyey howlgal ka dhan ah TPLF, isaga oo ku eedeeyey iney maleeshiyaad daacad u ah ay weerar ku qaadeen xaruunta ciidamada qaybta waqooyi oo fadhigoodu ahaa magaalada Maqale.
Qaar badan oo ka mid ah dadka dagaalkaasi ka soo qaxayna waxay sheegeen iney ka soo carareen duqeymaha, toogashada iyo mindiya dadka lagu beegsanayo.
Haddaba muxuu gobolka Tigraay caan ku yahay?
1. Boqortooyadii Aksum ayaa waxaa xuddun u ahaa gobolkan.Waxaa lagu sifeeyey mid ka mid ah ilbaxyadii ugu waaweynaa ee horay u soo maray dunida. Waxay mar ahayd dowladdii ugu xoogga badneyd ee u dhexaysay boqortooyooyinkii Roomaanka iyo Beershiya.
Khasaare ka Dhashey Shaqaaqo Dagaal oo dhacdey Buuhoodle iyo Masuuliyiin ka Digey.
15/01/2021 - 17:35:41
15/01/2021 - 13:16:12
15/01/2021 - 12:49:32
Deg Deg Ah:-Itoobiya oo digniin u dirtay dowladda Sudan
13/01/2021 - 10:37:24
12/01/2021 - 13:18:41
Golaha Islaamka Itoobiya Oo Cambaareeyey Weerarkii Lagu Qaaday Masaajid
06/01/2021 - 18:53:27
Wadahadalkii Masar suudaan iyo itoobiya Oo Lagukalakacay Iyo Dagaallo Socda
05/01/2021 - 09:38:37
Dowladda Itoobiya oo Soo bandhigtay magacyada saraakiil sare oo ay ka dishay Tigrayga
02/01/2021 - 15:16:23
Maleeshiyaad Puntland Abaabushay Oo Dhaq-dhaqaaq Dagaal Ka Sameeyay Gobolka Buhoodle.
02/01/2021 - 14:12:04
Qaramada Midoobay Oo Ergey Cusub U Magacaabay Somalia Dalkee Ayay U Dhalatay
31/12/2020 - 13:45:25